Bank Chor (2017) (App member only) ##unicode ကဲ ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ "Bank Chor"လို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယဇာတ်ကားလေးပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်အလှည့်အပြောင်းများနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့...ချမ်ပတ်ခ်ဟာ သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့အတူ ဘဏ်လုယက်မှုတစ်ခုကို စတင်ပါတော့တယ်။စီဘီအိုင်အရာရှိအမ်ဂျာခန်ဟာလည်း ဘဏ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာ လုယက်သူတွေကိုဖမ်းစီးဖို့ရောက်ရှိရင်း အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဘဏ်အတွင်းထဲမှ ချမ်ပတ်ခ်နဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာ ဘဏ်အပြင်ကိုအဖမ်းမခံရပဲထွက်လို့ရဖို့ ကြံစည်နေတုန်းမှာပဲ သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဓားစာခံတွေထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျက်ဂူဟာ တကယ့်လုယက်သူအစစ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေကြောင်း ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်။ ဂျက်ဂူဟာ သူများရဲ့စေခိုင်းချက်အရ ဘဏ်ရဲ့လော့ကာထဲမှ အရေးကြီးပစ္စည်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနေခဲ့ပြီး သူရဲ့သေနတ်ပစ်ဖောက်မှုကြောင့် ဓားစာခံတွေထဲမှလူတစ်ယောက်ကိုလည်းအပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရစေခဲ့ကာ တစ်ခြားသောဓားစာခံများဟာလည်း အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဘဏ်အတွင်းထဲမှချမ်ပတ်ခ်ဟာ သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါတွေအပါအဝင် ဓားစာခံတွေအားလုံးဘဏ်အပြင်ကိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းရောက်ရှိစေရေးအတွက် အမ်ဂျာခန်နဲ့အတူတိတ်တဆိတ်ပူးပေါင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့...... ဘဏ်ထဲမှလူတွေအားလုံးဟာ အပြင်ကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ရောက်ရှိသွားမလား၊ ဂျက်ဂူနဲ့ချမ်ပတ်ခ်မှာ ဘယ်သူကများ တကယ့်လုယက်သူအစစ်ဖြစ်နေမလဲ၊ အမ်ဂျာခန်ကရော လုယက်သူကိုဖမ်းဆီးနိုင်ပါ့မလား၊ ချမ်ပတ်ခ်ရဲ့ လျှို့ဝှက်မစ်ရှင်ကရော အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ဇာတ်ကားထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ။ ##zawgyi ကဲ ဒီတစ္ခါတင္ဆက္ေပးထားတဲ့ဇာတ္ကားကေတာ့ "Bank Chor"လို႔ေခၚတဲ့အိႏၵိယဇာတ္ကားေလးပါ။ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္အလွည့္အေျပာင္းမ်ားနဲ႔ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေအာင္႐ိုက္ကူးထားတဲ့ဇာတ္ကားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းထဲမွာေတာ့...ခ်မ္ပတ္ခ္ဟာ သူ႔ရဲ႕အေပါင္းအပါသူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္နဲ႔အတူ ဘဏ္လုယက္မႈတစ္ခုကို စတင္ပါေတာ့တယ္။စီဘီအိုင္အရာရွိအမ္ဂ်ာခန္ဟာလည္း ဘဏ္ရဲ႕အျပင္ဘက္မွာ လုယက္သူေတြကိုဖမ္းစီးဖို႔ေရာက္ရွိရင္း အေျခအေနေတြကိုေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုနဲ႔ ဘဏ္အတြင္းထဲမွ ခ်မ္ပတ္ခ္နဲ႔အဖြဲ႕သားေတြဟာ ဘဏ္အျပင္ကိုအဖမ္းမခံရပဲထြက္လို႔ရဖို႔ ႀကံစည္ေနတုန္းမွာပဲ သူတို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ဓားစာခံေတြထဲမွတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဂ်က္ဂူဟာ တကယ့္လုယက္သူအစစ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပလိုက္ပါေတာ့တယ္။ ဂ်က္ဂူဟာ သူမ်ားရဲ႕ေစခိုင္းခ်က္အရ ဘဏ္ရဲ႕ေလာ့ကာထဲမွ အေရးႀကီးပစၥည္းတစ္ခုကိုရွာေဖြေနခဲ့ၿပီး သူရဲ႕ေသနတ္ပစ္ေဖာက္မႈေၾကာင့္ ဓားစာခံေတြထဲမွလူတစ္ေယာက္ကိုလည္းအျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရေစခဲ့ကာ တစ္ျခားေသာဓားစာခံမ်ားဟာလည္း အႀကီးအက်ယ္ထိတ္လန္႔မႈေတြျဖစ္လာပါတယ္။ အဲ့တာေၾကာင့္ ဘဏ္အတြင္းထဲမွခ်မ္ပတ္ခ္ဟာ သူ႔ရဲ႕အေပါင္းအပါေတြအပါအဝင္ ဓားစာခံေတြအားလုံးဘဏ္အျပင္ကိုအႏၲရာယ္ကင္းကင္းေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ အမ္ဂ်ာခန္နဲ႔အတူတိတ္တဆိတ္ပူးေပါင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာေတာ့...... ဘဏ္ထဲမွလူေတြအားလုံးဟာ အျပင္္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ေရာက္ရွိသြားမလား၊ ဂ်က္ဂူနဲ႔ခ်မ္ပတ္ခ္မွာ ဘယ္သူကမ်ား တကယ့္လုယက္သူအစစ္ျဖစ္ေနမလဲ၊ အမ္ဂ်ာခန္ကေရာ လုယက္သူကိုဖမ္းဆီးႏိုင္ပါ့မလား၊ ခ်မ္ပတ္ခ္ရဲ႕ ...
The Last Warrior (Poslednii Bogatir) (2017) (App member only) ##unicode Last knightဇာတ်ကားကတော့ရုရှား fantasy/comedyဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် Ivanဟာ မှော်ဆရာအဖြစ်နဲ့လူတွေကို လိမ်လည်နေတဲ့ မှော်ဆရာတုတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူလိမ်လည်ဖူးတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ယောကျာ်းက ပြသာနာလာရှာလို့ထွက်ပြေးရင် အခြားကမ္ဘာတစ်ခုကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။သူ့ကိုအဲ့ကမ္ဘာကိုခေါ်လိုက်တဲ့ မှောဆရာကြီးက Ivanက သူရဲကောင်း IiyaMurometရဲ့သားဖြစ်ပြီးတော့ ဒီကမ္ဘာကသူရဲကောင်းတွေအားလုံးအသတ်ခံရပြီးတော့ Ivanတစ်ယောက်သာကျန်ရှိတော့ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။ ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိရသေးခင် Ivanတစ်ယောက်နန်းတော်ထဲကို အဖမ်းခံလိုက်ရပြီးတော့ နတ်သမီးပုံပြင်ထဲက Villain Koscheiနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။Koscheiက Ivanအိမ်ပြန်ဖို့အတွက် မှော်ဓားကိုလိုအပ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တာကြောင့် Ivanတစ်ယောက် Koscheiနဲ့အတူမှော်ဓားကိုရှာဖွေဖို့ခရီးထွက်ရတော့တယ်။ မှော်ပညာမတတ်တဲ့ Ivanတစ်ယောက်မှော်ဓားကိုရှာတွေ့ပြီးတော့ သူ့ကမ္ဘာကိုပြန်လာနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Last knightဇာတ္ကားကေတာ့႐ုရွား fantasy/comedyဇာတ္ကားတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္ Ivanဟာ ေမွာ္ဆရာအျဖစ္နဲ႔လူေတြကို လိမ္လည္ေနတဲ့ ေမွာ္ဆရာတုတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူလိမ္လည္ဖူးတဲ့အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ေယာက်ာ္းက ျပသာနာလာရွာလို႔ထြက္ေျပးရင္ အျခားကမာၻတစ္ခုကိုေရာက္သြားခဲ့တယ္။သူ႔ကိုအဲ့ကမာၻကိုေခၚလိုက္တဲ့ ေမွာဆရာႀကီးက Ivanက သူရဲေကာင္း IiyaMurometရဲ႕သားျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီကမာၻကသူရဲေကာင္းေတြအားလုံးအသတ္ခံရၿပီးေတာ့ Ivanတစ္ေယာက္သာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္းေျပာျပခဲ့တယ္။ ဘာေတြျဖစ္ေနမွန္းမသိရေသးခင္ Ivanတစ္ေယာက္နန္းေတာ္ထဲကို အဖမ္းခံလိုက္ရၿပီးေတာ့ နတ္သမီးပုံျပင္ထဲက Villain Koscheiနဲ႔ေတြ႕ဆုံခဲ့တယ္။Koscheiက Ivanအိမ္ျပန္ဖို႔အတြက္ ေမွာ္ဓားကိုလိုအပ္ေၾကာင္းေျပာျပခဲ့တာေၾကာင့္ Ivanတစ္ေယာက္ Koscheiနဲ႔အတူေမွာ္ဓားကိုရွာေဖြဖို႔ခရီးထြက္ရေတာ့တယ္။ ေမွာ္ပညာမတတ္တဲ့ Ivanတစ္ေယာက္ေမွာ္ဓားကိုရွာေတြ႕ၿပီးေတာ့ သူ႔ကမာၻကိုျပန္လာႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာ ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size –2.4GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL Genre : Action,Aventure,Comedy Subtitle : Myet Chel Encoded by Arrow ========================================================================================================= App ဒေါင်းရန္ App ...
IMDB: 6.5/10 2,614 votes
The Last Warrior (Poslednii Bogatir) (2017)
Moscow Never Sleeps (2017) (App member only) ##unicode "ဘယ်တော့မှမအိပ်စက်သောမောစကို"ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားနာမည်လေးအတိုင်းပဲ ပျားပန်းခတ်လှုပ်ရှားသွားလာသက်ဝင်နေတဲ့ မောစကိုမြို့ရဲ့ပွဲတော်ညတစ်ညနဲ့ လူငါးယောက်တို့ရဲ့ ဘဝငါးခုကို ဆက်စပ်ပြီးရိုက်ပြသွားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကို တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ - ကုမ္ပဏီကို အာဏာရှိတဲ့ဗျူရိုကရက်တွေသိမ်းတာခံလိုက်ရတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် - ဖခင်ရဲ့လျစ်လျူရှုထားခြင်းခံရပြီး ပုထွေးနဲ့နေနေရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတစ်ယောက် - ကိုယ့်ကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လာတဲ့ အဖွားဖြစ်သူကို လူအိုရုံပို့ပစ်ဖို့ တွန်းအားပေးခံရတဲ့လူတစ်ယောက် - တကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့သူရဲ့ နှောက်ယှက်မှုကိုခံနေရတဲ့ အဆိုတော်မိန်းမလှလေးတစ်ယောက် - အသက်ရှင်ဖို့လအနည်းငယ်သာကျန်တော့တဲ့ နာမည်ကြီးဟာသမင်းသားတစ်ယောက် ဒီလူငါးယောက်ရဲ့ဘဝတွေဟာ မော်စကိုမြို့ရဲ့ညတစ်ညနဲ့အတူ ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ခံစားကြည့်ရှုပေးပါဦး။ ##zawgyi "ဘယ္ေတာ့မွမအိပ္စက္ေသာေမာစကို"ဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားနာမည္ေလးအတိုင္းပဲ ပ်ားပန္းခတ္လႈပ္ရွားသြားလာသက္ဝင္ေနတဲ့ ေမာစကိုၿမိဳ႕ရဲ႕ပြဲေတာ္ညတစ္ညနဲ႔ လူငါးေယာက္တို႔ရဲ႕ ဘဝငါးခုကို ဆက္စပ္ၿပီး႐ိုက္ျပသြားတဲ့ဇာတ္လမ္းေလးကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ - ကုမၸဏီကို အာဏာရွိတဲ့ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြသိမ္းတာခံလိုက္ရတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ - ဖခင္ရဲ႕လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းခံရၿပီး ပုေထြးနဲ႔ေနေနရတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ - ကိုယ့္ကိုေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္လာတဲ့ အဖြားျဖစ္သူကို လူအို႐ုံပို႔ပစ္ဖို႔ တြန္းအားေပးခံရတဲ့လူတစ္ေယာက္ - တေကာက္ေကာက္လိုက္ေနတဲ့သူရဲ႕ ေႏွာက္ယွက္မႈကိုခံေနရတဲ့ အဆိုေတာ္မိန္းမလွေလးတစ္ေယာက္ - အသက္ရွင္ဖို႔လအနည္းငယ္သာက်န္ေတာ့တဲ့ နာမည္ႀကီးဟာသမင္းသားတစ္ေယာက္ ဒီလူငါးေယာက္ရဲ႕ဘဝေတြဟာ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရဲ႕ညတစ္ညနဲ႔အတူ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသြားမလဲဆိုတာကို ဇာတ္လမ္းေလးထဲမွာ ခံစားၾကည့္ရႈေပးပါဦး။ Review – Yue Liang File Size – 2.3GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre ...
The Gangster’s Daughter (2017) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်လောက်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ «The Gangster Daughter» ဆိုတဲ့ ထိုင်ဝမ်ဂိုဏ်းစတားကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် တခြားဂိုဏ်းစတားကားတွေနဲ့မတူဘဲ ဒီတစ်ခေါက်ကားလေးမှာတော့ဂိုဏ်းတွေကြားကပဋိပက္ခတွေထက်အဖေနဲ့သမီးကြားကသံယောဇဉ်ကို အသားပေးပြီး ရိုက်ကူးပြထားပါတယ် ရှောင်ဝူဟာ သူ့အမေဆုံးပါးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ သူ့အဖေဂန်းစတားသူဌေးကီကိုဆီမှာ သွားနေရဖို့ဖြစ်လာပါတယ် ရှောင်ဝူဟာအစတုန်းကတော့သူ့အဖေနဲ့စိမ်းနေခဲ့ပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့အဖေအပေါ်ခင်တွယ်လာခဲ့ပါတယ် သူဌေးကီကိုကလည်း အရင်ကတော့ အကြောက်အလန့်ကင်းပြီးဆိုးမိုက်ခဲ့ပေမယ့် သူ့သမီးလေးကိုတော့ သူ့လိုဖြစ်မှာ လမ်းမှားရောက်မှာကိုစိုးရိမ်လာပါတယ် ရှောင်ဝူတစ်ယောက်လမ်းမှားမရောက်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ထိန်းကျောင်းသွားနိုင်ပါ့မလား လူဆိုးဂိုဏ်းတွေကြားမှာ သူတို့သားအဖနှစ်ယောက်အေးအေးချမ်းချမ်းဘဝလေးတည်ဆောက်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေလာက္ကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ «The Gangster Daughter» ဆိုတဲ့ ထိုင္ဝမ္ဂိုဏ္းစတားကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ တျခားဂိုဏ္းစတားကားေတြနဲ႔မတူဘဲ ဒီတစ္ေခါက္ကားေလးမွာေတာ့ဂိုဏ္းေတြၾကားကပဋိပကၡေတြထက္အေဖနဲ႔သမီးၾကားကသံေယာဇဥ္ကို အသားေပးၿပီး ႐ိုက္ကူးျပထားပါတယ္ ေရွာင္ဝူဟာ သူ႔အေမဆုံးပါးသြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သူ႔အေဖဂန္းစတားသူေဌးကီကိုဆီမွာ သြားေနရဖို႔ျဖစ္လာပါတယ္ ေရွာင္ဝူဟာအစတုန္းကေတာ့သူ႔အေဖနဲ႔စိမ္းေနခဲ့ေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သူ႔အေဖအေပၚခင္တြယ္လာခဲ့ပါတယ္ သူေဌးကီကိုကလည္း အရင္ကေတာ့ အေၾကာက္အလန႔္ကင္းၿပီးဆိုးမိုက္ခဲ့ေပမယ့္ သူ႔သမီးေလးကိုေတာ့ သူ႔လိုျဖစ္မွာ လမ္းမွားေရာက္မွာကိုစိုးရိမ္လာပါတယ္ ေရွာင္ဝူတစ္ေယာက္လမ္းမွားမေရာက္ေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ထိန္းေက်ာင္းသြားႏိုင္ပါ့မလား လူဆိုးဂိုဏ္းေတြၾကားမွာ သူတို႔သားအဖႏွစ္ေယာက္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းဘဝေလးတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ့မလား ဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Hmue File Size – 2GB,1GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Crime,Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by ...
Man of Will (2017) (mobile app premium only) ##unicode Man of Will ဇာတ်ကားကတော့ ဂျပန်တွေကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ ဂျိုဆွန်ခေတ်က ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်စောလို့လူသိများလှတဲ့ မင်းသားကြီး Song Seung-Heon က ဗီလိန်အဖြစ်ပါဝင်ထားပြီး Cho Jin-Woong(Me and Me/Jesters/Black Money) ကတော့ အဓိကမင်းသားနေရာကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Kim Chang Sooဟာ ဂျပန်တစ်ယောက်ကို သတ်လိုက်တဲ့အမှုကြောင့် အင်ချွန်းအကျဉ်းထောင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Kim Chang Sooက ဂျိုဆွန်မိဖုရားကို လုပ်ကြံခဲ့တဲ့ လူသတ်သမားကို သတ်လိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ သူ့ကို တရားသူကြီးက သေမိန့်ပေးလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Kim Chang Sooတစ်ယောက် ထောင်ထဲမှာ အနှိပ်စက်ခံပြီး သေမဲ့နေ့ကိုစောင့်စားနေရပါတော့တယ်။ အင်ချွန်းထောင်က အကျဉ်းသားအများစုက စာမတတ်တာကြောင့် မဟုတ်မမှန်တဲ့စွပ်စွဲချက်တွေကြောင့် အကျဉ်းထောင်ကိုရောက်လာကြောင်း Kim Chang Sooတစ်ယောက်သိလိုက်ရချိန်မှာတော့ ထောင်သားတွေအတွက် အသနားခံစာတွေရေးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူသေဒဏ်ပေးခံလိုက်ရချိန်မှာ ဒီထောင်သားတွေအတွက် စိုးရိမ်တာကြောင့် အကျဉ်းသားတွေကို စာရေးတတ် ဖတ်တတ်အောင် သင်ကြားပေးဖို့ Kim Chung Sooကစီစဉ်ပါတော့တယ်။ ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေက အကျဉ်းသားတွေကို ဘယ်လိုအမျိုးမျိုးနှိပ်ကွက်ကြမလဲ။ Kim Chung Sooရော သေဒဏ်ကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ...
Eat Play Laugh (2017) ##unicode ဒီတစ်ခါ ထိုင်းဟာသကားတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် သူငယ်ချင်း၅ယောက်ရဲ့အလွဲတွေကိုဟာသဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းမယ်ဇာတ်ကားလေးပါ စရိုက်မတူအလုပ်မတူတဲ့သူငယ်ချင်း၅ယောက်ကတော့ သူဌေးသားပရော်ဖက်ဆာပရင့် လေယာဉ်မှူးနာမို ရှေ့နေ့ ကင် ဂေးပလတ်စတစ်ဆာဂျရီဆရာဝန်ပလောင်နဲ့ ကြက်ဥကြော်သည်လေးမာလီပဲဖြစ်ပါတယ် အားလုံးရဲ့ဗရုတ်သုတ်ခနိုင်မှုတွေကိုလိုက်ထိန်းပေးတာကတော့ အဖွဲ့ထဲကတစ်ဦးတည်းသောမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ နာမိုပဲဖြစ်ပါတယ် ပလောင်ရဲ့တော်ကီ တွေကလည်း ကြည့်တဲ့လူတွေကိုရယ်ရစေပါတယ် မာလီရဲ့ကြက်ဥကြော်ဆိုင်မှာသူတို့အုပ်စုဘယ်လိုဗရုတ်ကျကြမလဲဆိုတာလည်းရယ်ရယ်မောမောကြည့်ရူရမယ့် ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ညွှန်းပေးလိုက်ရပါတယ်နော် ##zawgyi ဒီတစ္ခါ ထိုင္းဟာသကားတစ္ကားကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ သူငယ္ခ်င္း၅ေယာက္ရဲ႕အလြဲေတြကိုဟာသဆန္ဆန္႐ိုက္ကူးထားၿပီးေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ၾကည့္လို႔ေကာင္းမယ္ဇာတ္ကားေလးပါ စ႐ိုက္မတူအလုပ္မတူတဲ့သူငယ္ခ်င္း၅ေယာက္ကေတာ့ သူေဌးသားပေရာ္ဖက္ဆာပရင့္ ေလယာဥ္မႉးနာမို ေရွ႕ေန႔ ကင္ ေဂးပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီဆရာဝန္ပေလာင္နဲ႔ ၾကက္ဥေၾကာ္သည္ေလးမာလီပဲျဖစ္ပါတယ္ အားလုံးရဲ႕ဗ႐ုတ္သုတ္ခႏိုင္မႈေတြကိုလိုက္ထိန္းေပးတာကေတာ့ အဖြဲ႕ထဲကတစ္ဦးတည္းေသာမိန္းကေလးျဖစ္တဲ့ နာမိုပဲျဖစ္ပါတယ္ ပေလာင္ရဲ႕ေတာ္ကီ ေတြကလည္း ၾကည့္တဲ့လူေတြကိုရယ္ရေစပါတယ္ မာလီရဲ႕ၾကက္ဥေၾကာ္ဆိုင္မွာသူတို႔အုပ္စုဘယ္လိုဗ႐ုတ္က်ၾကမလဲဆိုတာလည္းရယ္ရယ္ေမာေမာၾကည့္႐ူရမယ့္ ဇာတ္ကားျဖစ္လို႔ၫႊန္းေပးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္ review – Hmue File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Genre : Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (hardsub) Translated by Hmue Encoded by Arrow
Venkatapuram (2017) ##unicode တစ်နေ့မှာ Venkatapuramရဲစခန်းကို လူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်လို့တိုင်ကြားတဲ့ဖုန်းတစ်ကောဝင်လာခဲ့တယ်။ လူသတ်မှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုရဲတွေသွားကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးအလောင်းတစ်လောင်းကိုအိတ်နဲ့ထုတ်ပြီး စွန့်ပစ်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ် အလောင်းကိုအိုင်ဒီအတည်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ လူပျောက်တိုင်ခံထားရတဲ့ကျောင်းသူလေး Chantraဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ရဲတွေက လူသတ်သမားကို စုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါ Chantraအိမ်ထပ်ခိုးမှာနေတဲ့ Chantraရည်းစား Anandဖြစ်နေခဲ့တယ်။ လူသတ်သမားအဖြစ် စွတ်စွဲခံထားရတဲ့ Anandကပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်သွားတာကြောင့် ရဲတွေလဲအမှုကိုပိတ်လိုက်ရတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ Anandတစ်ယောက်ဟာ Venkatapuramရဲစခန်းမှာဘဲ ရဲတွေကိုသတ်ဖို့ကြိုးစားမှုနဲ့အဖမ်းခံထားရတာကို ဘယ်သူမှမသိခဲ့ပါဘူး။ Anandတစ်ယောက်ရဲစခန်းမှာ ဘာလို့အဖမ်းခံထားရတာလဲ။ Chantraကိုရော တကယ်ဘဲသူသတ်လိုက်ခဲ့တာလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi တစ္ေန႔မွာ Venkatapuramရဲစခန္းကို လူသတ္မွုတစ္ခုျဖစ္လို့တိုင္ၾကားတဲ့ဖုန္းတစ္ေကာဝင္လာခဲ့တယ္။ လူသတ္မွုျဖစ္တဲ့ေနရာကိုရဲေတြသြားၾကည့္လိုက္ေတာ့အမ်ိဳးသမီးအေလာင္းတစ္ေလာင္းကိုအိတ္နဲ႔ထုတ္ၿပီး စြန္႔ပစ္ထားတာကိုေတြ႕ခဲ့ရတယ္ အေလာင္းကိုအိုင္ဒီအတည္ျပဳလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ လူေပ်ာက္တိုင္ခံထားရတဲ့ေက်ာင္းသူေလး Chantraျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ ရဲေတြက လူသတ္သမားကို စုံစမ္းလိုက္တဲ့အခါ Chantraအိမ္ထပ္ခိုးမွာေနတဲ့ Chantraရည္းစား Anandျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ လူသတ္သမားအျဖစ္ စြတ္စြဲခံထားရတဲ့ Anandကေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္သြားတာေၾကာင့္ ရဲေတြလဲအမွုကိုပိတ္လိုက္ရေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ Anandတစ္ေယာက္ဟာ Venkatapuramရဲစခန္းမွာဘဲ ရဲေတြကိုသတ္ဖို့ႀကိဳးစားမွုနဲ႔အဖမ္းခံထားရတာကို ဘယ္သူမွမသိခဲ့ပါဘူး။ Anandတစ္ေယာက္ရဲစခန္းမွာ ဘာလို့အဖမ္းခံထားရတာလဲ။ Chantraကိုေရာ တကယ္ဘဲသူသတ္လိုက္ခဲ့တာလားဆိုတာကို ၾကည့္ရွုၾကပါအုံး။ review – Myet Chel File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (hardsub) Translated by Myet Chel Encoded by Arrow
I Can Quit Whenever I Want 3: Ad Honorem ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ crime comedy အမျိုးအစား အီတလီဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်ကတော့ ဇင်နီက တက္ကသိုလ်ကအထုတ်ခံရတဲ့ ပရော်ဖက်ဆာတစ်ယောက်ပါ အခြားသူ့လိုမျိုးပရော်ဖက်ဆာတွေနဲ့လူစုပြီး တရားမဝင်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ရေးစီးပွါးရေးလုပ်ပါတယ် တစ်နေ့ သူတို့မထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆို့ဘောက်ဆိုတဲ့ဆေးဝါးအတွက် တရားစွဲခံရပြီး တစ်ဂိုဏ်းလုံးထောင်ကျသွားပါတော့တယ် အဲ့အချိန်မှာ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ပါတီယိုဇင်နီက ဆို့ဘောက်ဆိုတဲ့ဆေးကိုတီထွင်သူအကြောင်းနဲ့ သူက အဆိပ်ငွေ့နဲ့လူတွေကိုသတ်ဖို့ကြံနေကြောင်းကိုသိသွားပါတော့တယ် သူတို့ဂိုဏ်း ထောင်ဖောက်ပြေးပြီး ဒီကိစ္စကိုတားဖို့ကြိုးစားကြမှာပါ ပရော်ဖက်ဆာလူဆိုးတွေ ဘယ်လိုများထောင်ဖောက်ကြမှာလဲ အဆိပ်ငွေ့တွေလုပ်နေတဲ့လူကလည်း ပရော်ဖက်ဆာတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ဇာတ်လမ်းကစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်း ရယ်စရာတွေလည်းပါလို့ အခုပဲကြည့်လိုက်ပါတော့နော် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ crime comedy အမ်ိဳးအစား အီတလီဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကေတာ့ ဇင္နီက တကၠသိုလ္ကအထုတ္ခံရတဲ့ ပေရာ္ဖက္ဆာတစ္ေယာက္ပါ အျခားသူ႔လိုမ်ိဳးပေရာ္ဖက္ဆာေတြနဲ႔လူစုၿပီး တရားမဝင္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေရးစီးပြါးေရးလုပ္ပါတယ္ တစ္ေန႔ သူတို႔မထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ဆို႔ေဘာက္ဆိုတဲ့ေဆးဝါးအတြက္ တရားစြဲခံရၿပီး တစ္ဂိုဏ္းလုံးေထာင္က်သြားပါေတာ့တယ္ အဲ့အခ်ိန္မွာ ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ ပါတီယိုဇင္နီက ဆို႔ေဘာက္ဆိုတဲ့ေဆးကိုတီထြင္သူအေၾကာင္းနဲ႔ သူက အဆိပ္ေငြ႕နဲ႔လူေတြကိုသတ္ဖို႔ႀကံေနေၾကာင္းကိုသိသြားပါေတာ့တယ္ သူတို႔ဂိုဏ္း ေထာင္ေဖာက္ေျပးၿပီး ဒီကိစၥကိုတားဖို႔ႀကိဳးစားၾကမွာပါ ပေရာ္ဖက္ဆာလူဆိုးေတြ ဘယ္လိုမ်ားေထာင္ေဖာက္ၾကမွာလဲ အဆိပ္ေငြ႕ေတြလုပ္ေနတဲ့လူကလည္း ပေရာ္ဖက္ဆာတစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔ ဇာတ္လမ္းကစိတ္ဝင္စားဖို႔လည္းေကာင္း ရယ္စရာေတြလည္းပါလို႔ အခုပဲၾကည့္လိုက္ပါေတာ့ေနာ္ review – Hmue File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Genre : Action, Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle ...
Vamps (Ghouls) (Vurdalaki) (2017) ##unicode ဒီကားလေးကတော့ ရုရှားဇာဘုရင်ခေတ်ကို အခြေခံထားတဲ့ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ကားဖြစ်ပါတယ်။ လာဗာဟာ နယ်နှင်ဒဏ်ခံရပြီး မြို့တော်နဲ့ဝေးရာနယ်စပ်ဒေသက ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာ ဘုန်းတော်ကြီးဝတ်ပြီးနေခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ဘုရင်ကသူ့ကိုအမှုတော်ပြန်ထမ်းဖို့အတွက် အမိန့်စာကို အတွင်းရေးအထောက်တော် အန်ဒရူးဆိုသူကနေတစ်ဆင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အန်ဒရူးတို့ ၂ ယောက်လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းကပြန်အလာ လမ်းမှာတွေ့တဲ့ရွာသူလေးတစ်ယောက်နဲ့ ခင်မင်ပြီးသူ့အိမ်မှာပဲ လိုက်တည်းဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲ့နေ့ညမှာပဲ ရွာထဲမှာသေသွားပြီးတဲ့ ကလေးမလေးက ဖုတ်ကောင်ဖြစ်ပြီးပြန်ရှာလာတာကို ရွာသားတွေကဝိုင်းသတ်လိုက်ကြပါတယ်။ ဒီအခါမှာတော့ အန်ဒရူးတစ်ယောက်လည်း မနေသာတော့ဘဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ တကယ်တော့ အဲ့ဒေသမှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကတည်းက ကမ္ဘာကြီးကိုအုပ်စိုးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အချိန်ကောင်းကိုစောင့်နေတဲ့ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တစ်ကောင်ရှိနေပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကြယ်နက္ခတ်တွေကလည်း နေရာမှန်ရောက်ပြီး လူလည်းမဟုတ်၊ ဖုတ်ကောင်လည်းမဟုတ်သူရဲ့သွေးနဲ့ဆိုရင် သူတို့တွေဟာ နေ့အလင်းရောင်ထဲမှာပါ ရှင်သန်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့လူသားနဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ ဒီတိုက်ပွဲမှာ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေပဲအနိုင်ရပြီး ကမ္ဘာကြီးကိုအုပ်စိုးသွားမလား၊ လူသားတွေဘက်ကပဲ အနိုင်ရနိုင်မလား၊ အတိတ်မှာရောဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေမလဲဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါဦး။ ##zawgyi ဒီကားေလးကေတာ့ ႐ုရွားဇာဘုရင္ေခတ္ကို အေျခခံထားတဲ့ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ကားျဖစ္ပါတယ္။ လာဗာဟာ နယ္ႏွင္ဒဏ္ခံရၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ေဝးရာနယ္စပ္ေဒသက ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဝတ္ၿပီးေနခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ဘုရင္ကသူ႔ကိုအမႈေတာ္ျပန္ထမ္းဖို႔အတြက္ အမိန႔္စာကို အတြင္းေရးအေထာက္ေတာ္ အန္ဒ႐ူးဆိုသူကေနတစ္ဆင့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အန္ဒ႐ူးတို႔ ၂ ေယာက္လည္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကျပန္အလာ လမ္းမွာေတြ႕တဲ့႐ြာသူေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ခင္မင္ၿပီးသူ႔အိမ္မွာပဲ လိုက္တည္းျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲ့ေန႔ညမွာပဲ ႐ြာထဲမွာေသသြားၿပီးတဲ့ ...
IMDB: 4.2/10 494 votes
Vamps (Ghouls) (Vurdalaki) (2017)
Fist & Faith (2017) ##unicode ၁၉၃၂ ခုနှစ်မှာ ဂျပန်ကျူးကျော်သူတွေက တရုတ်ပြည်အရှေ့မြောက်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းလာခဲ့ကြတယ် အမည်ခံအုပ်ချုပ်သူခန့်ထားပြီး မန်ချူးကူရုန်းနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ကာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ကျွန်ပညာရေးစနစ်လွှမ်းမိုးထားခဲ့တယ် အဲ့ဒီအချိန်ဟာ Progressive publishers တွေ Intellectuals တွေကိုလည်း ဖမ်းဆီးနှိမ်နင်းတဲ့ကာလအပိုင်းအခြားဖြစ်ပါတယ် ဂျပန်တွေက တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ သမိုင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရာ ပြည်မကြီးကနေ အရှေ့မြောက်နိုင်ငံတွေကိုခွဲထုတ်တာမျိုးတွေလည်း လုပ်နေခဲ့ကြပါတယ် ထိုအချိန်အခါမျိုးမှာ တရုတ်ကျောင်းသားတွေ ဆရာမတွေက underground Reading Societies တွေဖွဲ့စည်းပြီး တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုမတိမ်ကောအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာမှာ တရုတ်လူမျိုး လူငယ်ကျောင်းသားတွေအချင်းချင်းကြားမှာရော ဂျပန်တွေနဲ့ပါ ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရလဲဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအုံး ##zawgyi ၁၉၃၂ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္သူေတြက တ႐ုတ္ျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းကိုဝင္ေရာက္စီးနင္းလာခဲ့ၾကတယ္ အမည္ခံအုပ္ခ်ဳပ္သူခန႔္ထားၿပီး မန္ခ်ဴးကူ႐ုန္းႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကိုတည္ေထာင္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ကြၽန္ပညာေရးစနစ္လႊမ္းမိုးထားခဲ့တယ္ အဲ့ဒီအခ်ိန္ဟာ Progressive publishers ေတြ Intellectuals ေတြကိုလည္း ဖမ္းဆီးႏွိမ္နင္းတဲ့ကာလအပိုင္းအျခားျဖစ္ပါတယ္ ဂ်ပန္ေတြက တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ သမိုင္းတို႔ကိုဖ်က္ဆီးဖို႔ရာ ျပည္မႀကီးကေန အေရွ႕ေျမာက္ႏိုင္ငံေတြကိုခြဲထုတ္တာမ်ိဳးေတြလည္း လုပ္ေနခဲ့ၾကပါတယ္ ထိုအခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားေတြ ဆရာမေတြက underground Reading Societies ေတြဖြဲ႕စည္းၿပီး တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈမတိမ္ေကာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါတယ္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာမွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး လူငယ္ေက်ာင္းသားေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာေရာ ဂ်ပန္ေတြနဲ႔ပါ ဘယ္လိုမ်ိဳးအခက္အခဲေတြရင္ဆိုင္ရလဲဆိုတာကို ဇာတ္လမ္းထဲမွာ ...
Unforgettable (2017) ##unicode အတိတ်မှာ အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဂျူလီယာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ လက်ရှိဘဝမှာ အကောင်းဆုံး နေထိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ချစ်သူ ဒေးဗစ်ရှိရာ မြို့လေးကိုလက်ထပ်ဖို့လိုက်လာခဲ့တယ်၊ သူ့ချစ်သူမှာ အရင်အိမ်ထောင်နဲ့ရတဲ့ လီလီဆိုတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်လည်းရှိတယ်၊ ဒေးဗစ်နဲ့သူ့ဇနီးဟောင်းတို့က နားလည်မှုနဲ့ ကလေးကို တစ်လှည့်စီပြုစုစောင့်ရှောက်နေကြတာပေါ့၊ ဂျူလီယာကလည်း လီလီကို သူတတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်ပြီး အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေး တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေးဗစ်ရဲ့ ဇနီးဟောင်းက ဒေးဗစ်ကိုမပြတ်နိုင်တဲ့အပြင် ဂျူလီယာရဲ့အတိတ်ဆိုးကြီးကပါ ခြောက်လှန့်လာတဲ့အခါ ဂျူလီယာတစ်ယောက် သူ့အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးကို ဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မလား ဆိုတာတွေကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းလေးက ကြည့်ရင်းနဲ့ကို ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုပြီး သိချင်စိတ်ဖြစ်အောင်၊ မပျင်းသွားအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ (ခပ်ကြမ်းကြမ်း +ခန်းအနည်းငယ်ပါဝင်ကြောင်းတော့ ကြိုပြီး အသိပေးထားပါရစေ) ##zawgyi အတိတ္မွာ အျဖစ္ဆိုးေတြနဲ႔ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ဂ်ဴလီယာဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ လက္ရွိဘဝမွာ အေကာင္းဆုံး ေနထိုင္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ခ်စ္သူ ေဒးဗစ္ရွိရာ ၿမိဳ႕ေလးကိုလက္ထပ္ဖို႔လိုက္လာခဲ့တယ္၊ သူ႔ခ်စ္သူမွာ အရင္အိမ္ေထာင္နဲ႔ရတဲ့ လီလီဆိုတဲ့သမီးေလးတစ္ေယာက္လည္းရွိတယ္၊ ေဒးဗစ္နဲ႔သူ႔ဇနီးေဟာင္းတို႔က နားလည္မႈနဲ႔ ကေလးကို တစ္လွည့္စီျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနၾကတာေပါ့၊ ဂ်ဴလီယာကလည္း လီလီကို သူတတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆုံးေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ေအးခ်မ္းတဲ့ မိသားစုဘဝေလး တည္ေဆာက္ဖို႔ႀကိဳးစားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒးဗစ္ရဲ႕ ဇနီးေဟာင္းက ေဒးဗစ္ကိုမျပတ္ႏိုင္တဲ့အျပင္ ဂ်ဴလီယာရဲ႕အတိတ္ဆိုးႀကီးကပါ ေျခာက္လွန္႔လာတဲ့အခါ ဂ်ဴလီယာတစ္ေယာက္ သူ႔ေအးခ်မ္းတဲ့ဘဝေလးကို ...
IMDB: 5.1/10 13,656 votes
The Ash Lad: In the Hall of the Mountain King (2017) ##unicode The Ash land- The hall of the moutain king ဇာတ်ကားမှာတော့ ဒဏ္ဍရီလာအဆိုရ မင်းသမီးတွေအသက်၁၈နှစ်ပြည့်တဲ့အထိ လက်မထပ်ရသေးရင် တောင်ဘုရင်ဘီလူးကြီးဖမ်းဆီးတာကိုခံရတတ်ပါတယ်။ မင်းသမီး Kristinကတော့ အသက်၁၈နှစ်မှာ ဒိန်းမတ်မင်းသား နဲ့လက်မထပ်ချင်တာ ကြောင့်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ ဘုရင်ကြီးက မင်းသမီးကိုရှာနိုင်တဲ့ လူကို မင်းသမီးနဲ့လက်ထပ်ပေးပြီး နိုင်ငံတစ်ဝက်ခွဲပေးမယ်လို့ ကြေညာခဲ့တယ်။ Espen က အလုပ်မလုပ်ဘဲပြသာနာတစ်ခုခုပြီးတစ်ခုရှာတတ်တဲ့ ကောင်လေးပါ ။ ဒါကြောင့် သူ့အဖေနဲ့သူ့အကိုတွေက သူ့ကြောင့်အမြဲစိတ်ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူ့အဖေနဲ့ညီအကိုတွေ အမဲလိုက်နေတုန်း အိမ်စောင့်ကျန်နေခဲ့တဲ့ သူရဲ့ ဆော့ကစားမှုကြောင့် အိမ်မီးလောင်သွားခဲ့တယ်။အိမ်ကိုပြန်ဆောက်နိုင်ဖို့ ပိုက်ဆံရှာဖို့အတွက် Espenတို့ညီအကိုသုံးယောက်မင်းသမီးကိုရှာဖို့ ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ အရာရာမှာတုံးအတဲ့ Espenတစ်ယောက် တောင်ဘုရင်ဘီလူးကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီး မင်းသမီးကို ကယ်နိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ပါဝင်စားဆိုကြည့်ရှုရမဲ့ကားလေးပါ ##zawgyi The Ash land- The hall of the moutain king ဇာတ္ကားမွာေတာ့ ဒ႑ရီလာအဆိုရ မင္းသမီးေတြအသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္တဲ့အထိ လက္မထပ္ရေသးရင္ ေတာင္ဘုရင္ဘီလူးႀကီးဖမ္းဆီးတာကိုခံရတတ္ပါတယ္။ မင္းသမီး Kristinကေတာ့ အသက္၁၈ႏွစ္မွာ ဒိန္းမတ္မင္းသား နဲ႔လက္မထပ္ခ်င္တာ ေၾကာင့္ထြက္ေျပးသြားခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႔ ဘုရင္ႀကီးက ...
IMDB: 6.2/10 2,504 votes
Tiger Zinda Hai ၂၀၁၂ တုန္းက Ek Tha Tiger ဆုိတဲ့ သူလွ်ိဳအက္ရွင္ကားအၿပီး ဒုတိယေျမာက္ Tiger ႐ုပ္ရွင္အျဖစ္ ထြက္ရွိလာတာျဖစ္ ၿပီး စူပါစပိုင္ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ တိုက္ဂါးနဲ႔ဇိုရာ သူလွ်ိဳဇာတ္ လမ္းကို ဆက္လက္႐ႈစားရမွာပါ။ ျဖစ္ရပ္မွန္အေၾကာင္းအရာျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၄ တုန္းက အုိင္ အက္စ္အဖြဲ႕က ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့တဲ့ သူနာျပဳ ၄၆ ေယာက္ကို ကယ္ဆယ္တဲ့အေၾကာင္း အဓိက ဇာတ္အိမ္တည္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဇာတ္လမ္းရဲ႕ အဆက္အေနနဲ႔ RAW ေအးဂ်င့္တိုက္ဂါးနဲ႔ သူ႔ခ်စ္သူ ISI ေအးဂ်င့္ဇိုရာတို႔ဟာ လက္ထပ္ခဲ့ၾကၿပီး သားေလးနဲ႔အ တူ ဘဝကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ရွစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာခဲ့အၿပီးမွာ ေတာ့ အခ်စ္ကိုဦးစားေပးၿပီး မိသားစုအေရးပဲ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ၾက တဲ့ တိုက္ဂါးတုိ႔စံုတြဲအတြက္ မစ္ ရွင္တစ္ခုေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ တိုက္ဂါးရဲ႕ အလုပ္ရွင္ ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ရွီႏြိဳင္က အီရတ္ မွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ျပန္ေပးဆြဲျခင္းခံရတဲ့ အိႏၵိယသူနာျပဳ ၂၅ ...
IMDB: 5.9/10 21,311 votes
Bheemasena Nalamaharaja (2020) Drama IMDb 8.3/10 ##unicode အိမ်က မိန်းမက ဟိုမသွားနဲ့ ဒီမသွားနဲ့ ဟိုမလွှတ်ဘူး ဒီကိုစိတ်မချဘူး ပူညံပူညံလုပ်လွန်းလို့ညစ်နေတဲ့ ဘရိုတွေရှိလား ရှေ့တိုးခဲ့... ဒီမှာ မိန်းမချစ်တတ်သူကြီးတစ်ယောက်အကြောင်း ပြောပြမယ် တစ်ရံရောအခါဝယ်ပေါ့နော်..မိန်းမချောလေးတစ်ယောက်ဟာ အပန်းဖြေခရီးထွက်လာရင်းနဲ့အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုရဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာ အစားအသောက်ဝင်စားဖြစ်တယ် အဲ့ဒီက စားဖိုမှူးကြီးရဲ့လက်ရာက ကောင်းလွန်းလို့ မိန်းမချောလေးဟာ စာဖိုမှူးနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးသွားပါတော့တယ် နှစ်ယောက်သား စကားလက်ဆုံကြရင်း စားဖိုမှူးကြီးက မိန်းမချောလေးကို သူ့အကြောင်းပြောပြတယ် "မင်းလိုပဲ ငါ့ရဲ့အစားအသောက်တွေကို နှစ်သက်သဘောကျတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် အရင်က ဒီဆိုင်မှာ လာစားခဲ့ဖူးတယ်။ ငါတို့တွေ ရင်းနှီးချစ်ကျွမ်းဝင်သွားကြပြီး လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့တယ်။ ကံတရားရဲ့မျက်နှာသာမပေးမှုက မတော်တဆမှုတစ်ခုမှာ ငါ့မိန်းမဟာ အတိတ်မေ့သွားခဲ့ပြီး ငါနဲ့ဝေးရာကိုထွက်သွားခဲ့တယ်ကွာ" ရင်နာစရာဇာတ်လမ်းလေးက မိန်းမချောလေးဟာ စားဖိုမှူးကြီးရဲ့ အတိတ်မေ့နေတဲ့ သူ့မိန်းမဖြစ်နေလေတယ်။ ကဲ ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာတော့ ဇနီးမယားအပေါ်ထားရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနဲ့ ကိုယ့်ဇနီးမယားအတွက်ဆို ဘာပဲပေးဆပ်ရပေးဆပ်ရ အမြဲရှေ့ကနေမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးတဲ့ ခင်ပွန်းကောင်းတို့အကြောင်း ရိုက်ပြထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi အိမ္က မိန္းမက ဟိုမသြားနဲ႔ ဒီမသြားနဲ႔ ဟိုမလႊတ္ဘူး ဒီကိုစိတ္မခ်ဘူး ပူညံပူညံလုပ္လြန္းလို႔ညစ္ေနတဲ့ ဘရိုေတြရွိလား ေရွ႕တိုးခဲ့... ဒီမွာ မိန္းမခ်စ္တတ္သူႀကီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ေျပာျပမယ္ တစ္ရံေရာအခါဝယ္ေပါ့ေနာ္..မိန္းမေခ်ာေလးတစ္ေယာက္ဟာ ...
Animal Crackers ဒီတစ္ခါဇာတ္ကားေလးရဲ႕နာမည္ေလးကေတာ့ဆန္းပါတယ္ Animal Crackers (တိရစာၦန္ပုံမုန႔္ႂကြပ္ေလးမ်ား) ပါပဲ။ နာမည္ေလးကဆန္းသလိုဇာတ္ေၾကာင္းေလးကလည္းဆန္းပါတယ္။ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ပိုင္တဲ့ ဆပ္ကပ္ကိုမိန္းမေခ်ာေလးတစ္ေယာက္ေရာက္လာပါတယ္။ ေကာင္မေလးကေလာဘႀကီးတဲ့ အစ္ကိုကို မေ႐ြးပဲသေဘာေကာင္းတဲ့ ညီေလးကိုေ႐ြးခ်ယ္တဲ့အခါ ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္းမသင့္ျမတ္ေတာ့ပဲ အစ္ကိုျဖစ္သူဟာဆပ္ကပ္ကေနထြက္သြားပါေတာ့တယ္။ ညီျဖစ္သူနဲ႔ မိန္းကေလးတာလီယာရဲ႕ မဂၤလာပြဲမွာတာလီယာရဲ႕အေဒၚကလက္ဖြဲ႕တစ္ခုေပးခဲ့ပါတယ္။ တိရစာၦန္ပုံမုန႔္ေလးေတြပါတဲ့ေမွာ္ေသတၱာ ေလးပါ။ အဲဒီေမွာ္ေသတၱာေလးအစြမ္းေၾကာင့္ထိုစုံတြဲရဲ႕ဆပ္ကပ္က အရမ္းေက်ာ္ၾကားလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အကိုျဖစ္သူဟာ မေက်နပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆပ္ကပ္ထဲ ခိုးဝင္ၿပီး ေမႊေနာက္ရာကေန ကိစၥေပါင္း မ်ားစြာနဲ႔ ဇာတ္လမ္းေလးဟာ မ႐ိုးႏိုင္ေအာင္ ၿပီးဆုံးတဲ့အထိကို ၾကည့္လို႔ေကာင္းေနေတာ့ပါတယ္။
IMDB: 5.8/10 2,098 votes